Ahoana ny fomba hisorohana ny rohy fanodinana ao amin'ny karoka Google | Avy amin'ny Linux
Google mampiasa rohy avy amin'i redirect manatanteraka a hay fantarina of the kitika.
Soa fa misy fanampin-tsakafo for Firefox ary Chrome /chrome izay manala ny fanodinana ary mamadika ny valin'ny karoka tsirairay mankany amin'ny rohy voalohany, amin'izay dia mamonjy fotoana fandefasana pejy sy filaminana lehibe kokoa.
Rehefa mikaroka amin'ny alàlan'ny Google ny rohy valiny dia tsy mandeha mivantana amin'ilay tranokala - alefan'izy ireo aloha ny mpampiasa amin'ny pejy iray amin'ny mpizara Google izay manitsy ny mpampiasa mankany amin'ny pejy tadiavin'izy ireo tany am-boalohany.
Ity mekanisma ity dia ampiasaina hanarahana ny valin'ny karoka izay kitihan'ny mpampiasa amin'izany, hoy i Google, "manome anay votoaty tsara kokoa sy doka tsara kokoa amin'ny doka."
Ho an'ny maro, tsy olana io, fa indraindray rehefa sendra miadana ianao, na raha te handefa rohy mankany amin'ny namanao izay hita ao amin'ny valin'ny fikarohana ianao dia mety ho lasa asa sarotra be izany. Tsy lazaina intsony raha "conspiratorial" toa ahy ianao ary tsy tianao hisy olona hanakorontana ny fiainanao manokana.
Azo antoka fa misy hatrany ny safidy hafa amin'ny tsy fampiasana Google mihitsy. Misy safidy hafa toa ny DuckDuckGo, fa raha tsy te-hiala amin'ny motera fikarohana G lehibe ianao dia azo atao ny mampiasa fanitarana tena ilaina mba hanesorana ny redirect izay ampidirin'i Google amin'ireo rohy rehetra ao amin'ny pejin-tranonkala (valin'ny fikarohana, ao amin'ny Google+, sns.) .
Ohatra, raha hiditra amin'ny pejy https://addons.opera.com/en/extensions/details/dress-up-webpage/ avy amin'i Google +…
Alohan'ny hampiasana ny fanitarana:
Rehefa avy nampiasa ny fanitarana:
Misintona extension ho an'ny Firefox Sintomy ny extension ho an'ny Chromium
Fanazavana: ny fampiasana ireo fanitarana ireo dia tsy fitandremana ampy raha toa ianao te-hijery tsy fantatra anarana amin'ny Google. Amin'izay dia mamporisika anao aho hitsidika ny pejy https://history.google.com/history/, rehefa niditra an-tsehatra tamin'ny anaranao taloha, ary tsy mampandeha ny safidy fanaraha-maso.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Ahoana ny fomba hisorohana ny rohy fanodinana ao amin'ny karoka Google
Manana fizarana marin-toerana aho, tontolon'ny birao milamina ary mankaleo ahy